ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem]
1 ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 4th August 2009, 12:41 pm
အနော့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေး PES 2009 ကစားနေတုန်းမီးကဗြုန်းဆိုပျက်သွားတယ်ဗျ
2 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 4th August 2009, 5:14 pm
အစ်ကို က PC တက်တာ ပြန်မြန်ချင်လို့မေးထားတယ်ထင်လို့နော်...
temp တွေ ဘာတွေကို ရှင်းကြည့်ပါလား
ဒါမှမဟုတ် Disk ကို Defrag လုပ်ကြည့်ပေါ့...
ပြီးတော့ start up program တွေ ဖြုတ်လိုက်လေ... အဆင်ပြေမှာပါ...
အစ်ကို ဖြစ်တာ ဘာလဲဆိုတာ သေချာမသိလို့ ဒီလောက်ဘဲပြောခဲ့တယ်နော်...
အသေးစိတ်ထပ်ပြောပြရင်ပိုကောင်းမှာပါ... ဘယ်လို ဖြစ်ချင်လို့လဲဆိုတာပေါ့...
3 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 4th August 2009, 5:18 pm
Repair ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလားဗျ window ကို...
4 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 5th August 2009, 9:33 am
ကို[You must be registered and logged in to see this link.] ပြောသလိုမျိုးတွေလုပ်ကြည့်တယ်ဗျ
temp တွေလဲရှင်းတယ်.. DiskDefrag လုပ်တယ်ဗျ
error ကြီးပဲတက်တက်လာတယ် မပြောမဆိုနဲ့ Restart ကျကျသွားတယ်ဗျာ
window ကိုတော့ Repair လုပ်တတ်ဘူးဗျ နည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ
5 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 5th August 2009, 9:35 am
အဲ...အဲ့လိုမျိုး restart ကျတယ်ဆိုရင် Virus scan လုပ်ကြည့်ပါလား kasper လိုမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ...
6 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 5th August 2009, 3:43 pm
အစ်ကိုရေ .. ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်နော် ... အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ် .. windows repair ပါ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Last edited by N@Y Y!N3 on 8th October 2009, 7:21 pm; edited 1 time in total
7 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 6th August 2009, 5:28 am
ဟုတ်တယ်ဗျာ .. repair နဲ့လုပ်လိုက်လို့မှမရရင်လည်း ... run ထားတာတွေအားလုံးကို အကုန်ဖြုတ်လိုက် ..ပြီးမှ ပြန် run ကြည့်ပေါ့ .. ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း new window ပေါ့ဗျာ .. အဟဲ .. ပြီးရင် လေး သေးလား ဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး .. လေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကရိန်းကား ၁၀ စီးလောက်လွှတ်လိုက်မယ်နော် .. ပေါ့သွားအောင်လို့ .. နောက်တာပါ ...
8 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 6th August 2009, 11:07 am
9 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 6th August 2009, 6:07 pm
နောက်လည်း ပြဿနာဖြစ်ရင် အဲဒီ့နည်းနဲ့သာရှင်းပေတော့... အဟိ...
10 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 6th August 2009, 9:38 pm
But Antivirus ကောင်း၂ လေးတော့သုံးစေချင်တယ်ဗျာ...အဲ့လိုမျိုးသာ တစ်ရက်တစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာ...တစ်ရက်တစ်ခါ Format ရိုက်..ဟီဟိ...အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Hard disk အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျာ
11 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 6th August 2009, 9:52 pm
ဟုတ်ပါတယ် .. အဲလို ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတော့ရှာသင့်တယ်ဗျ.. ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ .. ဒါမှ နောက်တစ်ခါ ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေမှာ .. format ကြီးပဲ ရိုက်ဆို .. မလွယ်ဘူး ..
12 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 7th August 2009, 8:57 am
တစ်ခုခုဖြစ်ရင် restore or format ပဲ့
13 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 13th August 2009, 12:32 pm
alt.332 wrote: But Antivirus ကောင်း၂ လေးတော့သုံးစေချင်တယ်ဗျာ...အဲ့လိုမျိုးသာ တစ်ရက်တစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာ...တစ်ရက်တစ်ခါ Format ရိုက်..ဟီဟိ...အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Hard disk အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျာ
မှန်လိုက်တာဗျာ အခုတော့ Hard disk အသစ်ကလေးရလိုက်တယ်
14 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem] on 8th October 2009, 6:48 pm
kst45th wrote: အနော့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေး PES 2009 ကစားနေတုန်းမီးကဗြုန်းဆိုပျက်သွားတယ်ဗျ
ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ သိတဲ့သူများကယ်ကြပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] ညီအစ်ကိုတွေပြောတာကတော့ အမှန်တွေပဲပေါ့ဗျာ။ အဓိက ဖြစ်တာကတော့ လျှပ်စစ်မီးပါပဲ။ ကွန်ပျူတာမှာ UPS ခံသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုသာ ခဏခဏ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ကွန်ပျူတာလေးတွေမှာ UPS ကတော့ဖြင့် မရှိမဖြစ်ကိုထားရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်စက်ကို နှမြောတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: ကယ်တော်မူကြပါ လို့တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ [Problem]